Aquaponics: kedu ihe ọ bụ, uru, mkpa na ọrụ mmepụta ihe | Azu
Portillo nke German | | Azụ azụ
La ihe ndi ozo Ọ bụ usoro na-agwakọta njirimara nke azụ azụ site n'ụzọ ọdịnala aquaculture na hydroponic omenala. Omenala hydroponic bụ otu nke ahịhịa ndị toro na-enweghị ụdị mkpụrụ ọ bụla. A na-eji mmiri nwere nnukwu mmiri edozi edozi maka nke a. Usoro a na - enyere aka ime ka gburugburu osisi na iyak di nma.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe aquaponics bụ na ihe bụ isi njirimara ya.
1 Gịnị bụ aquaponics
2 Otú o si arụ ọrụ
3 Gịnị dị mkpa iji mee ka aquaponics
4 Otu esi eme aquaponics n'ụlọ
6 Ọrụ aquaponics oru
Gịnị bụ aquaponics
Ọ bụ usoro na-adigide nke nwere ike imepụta ma osisi ma azụ. ijikọta njirimara nke aquaculture ọdịnala na omenala hydroponic. Ihe abuo a di nkpa ka ha nwee ike iguzoba umu anumanu ma kpoo ahihia. Ihe mkpofu site na ịkọ azụ nwere ike ịbakọta n'ime mmiri ma jiri sistemụ mechiri emechi nke nwere ike weghachite usoro aquaculture omenala.
N’agbanyeghi na mmiri juputara na mmiri nmali nwere ike buru nsi nye ufodu anumanu, agagh aghapu ya na obu ihe di nkpa n’uto osisi. Nke a bụ n'ihi na ihe ndị a na-asọpụta bara ụba na nri ndị osisi chọrọ inwe ike tolite nke ọma.
Otú o si arụ ọrụ
Aquaponics na-arụ ọrụ dị iche iche mmiri ma ọ bụ subsystems. Ka anyi lee ihe bu ihe emebere na omume a:
Ozuzu tank: obu ebe azu n’eri nri. ọ bụ obere obere ebe obibi ya maka mmepe ya.
Mwepụ siri ike: Ọ bụ ihe a na-eji ewepụ ihe oriri nke azụ na-eri ma kpọkọta ihe kachasị mma. N’ebe a, a na - ekepụta biofilm n’elu mmiri.
Bio iyo: Dị ka niile aquatic gburugburu, nitrification bacteria na-mkpa. Nje bacteria ndị a bụ ọrụ maka ịgbanwe amonia ka ọ bụrụ nitrates nke ahịhịa na-akụnye.
Hydroponic okpuru igwe: bụ akụkụ nke usoro ihe niile ebe osisi nwere ike itolite site na ịmị mkpụrụ na mmiri. N'okwu a enweghị ụdị mkpụrụ. Ọ bụ mmiri nwere nri na-eme ka osisi nwee ike ịzụlite.
Sump: ọ bụ akụkụ kasị ala nke usoro hydroponic ọ bụla. Nke a bụ akụkụ ebe mmiri na-asọ ma na-agbanye ya na tankị ịzụ azụ.
Gịnị dị mkpa iji mee ka aquaponics
Inwe ike ime aquaponics ị chọrọ ihe dị ezigbo mkpa. Ihe niile gbasara ntinye. Ntinye ume bu mgbanwe ikuku nke amonia na nitrates. Nitrates bu ndi kwesiri iwelata nsi nke mmiri maka azu. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ekpochapụ nitrates ahụ site na osisi ma jiri ya mee ihe oriri. Azụ nwere ike ịwụfu amonia mgbe niile dị ka ngwaahịa nke metabolism ha.
Imirikiti amonia a chọrọ ka a nụchaa ya, ebe ọ bụ na ọ nwere ike igbu azụ. Nke a na - eme ka aquaponics jiri ikike nke nje nwere ike ịgbanwe ha n’ime ihe ndị ọzọ dị na nitrogenous.
Ime aquaponics ị chọrọ aquaponic usoro kpụrụ aka site na abụọ subsystems. Ndị a bụ:
Cultikọ ihe ọkụkụ na hydroponics.
Azụ azụ na tank azụ site na iji aquaculture.
Otu esi eme aquaponics n'ụlọ
Enwere ọtụtụ ndị chọrọ ịme aquaponics n'ụlọ. Ha kwesịrị ịma na ha chọrọ ihe ụfọdụ dị mkpa iji mezuo ya. Ihe ndị a bụ ndị a:
Tebụl na-akọ nri
Mmiri mmiri abụọ
Mmiri iyi mgbapụta
Ihe mbụ bụ itinye tank ahụ na tebụl na-eto eto. You nwere ike ịme oghere nke siphon dị ọcha ma anyị nwere ike idowe ya n'etiti tebụl na tank. A ghaghị itinye tankị ahụ n'okpuru akwarium ahụ ma anyị tinye mgbapụta mmiri nke ga-aga ebe a ga-etinye osisi ahụ. Ọzọ, anyị na-etinye ọkpọkọ ahụ na oghere iji chebe siphon ahụ site na ụrọ ụrọ. A ga-asacha ụrọ.
Anyị na-etinye osisi ahụ n'ite ụrọ ma jupụta na mmiri ka o wee nwee ike ịmalite nzacha. A gaghị etinye azụ maka ihe dị ka izu 3, mgbe usoro a na-agba ọsọ ugbu a na enwere mpaghara nje. Ka anyị ghara ichefu na nje bacteria bụ ọrụ maka ịgbanwe amonia, ihe efu nke azụ site na metabolism, banye na nitrate nke osisi na-eji dị ka nri. Nke a bụ nguzo na-aga n'ihu nke aquaponics ga-enwerịrị.
Dịka enwere ike ịtụ anya, omume a nwere nnukwu erughị eru, uru akụ na ụba na nrụpụta. Ka anyị nyochaa ihe bụ uru nke aquaponics.
Mkpụrụ dị elu karịa mmụba hydroponic na nke enyere site na mmiri aquaculture. Maka arụmọrụ a ka ọ dị elu, a ga-ebu ụzọ mee ka ọ kwụsie ike.
Ọ dịghị ụdị ihe mmerụ ọ bụla. Na mgbakwunye, mmiri mmiri pere mpe ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere usoro ọrụ ugbo ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi usoro ntụgharị ya. Tan maara iji mejupụta mmiri nke na-efu site na mmiri.
Ọ dịghị mkpa iji edozi edozi dị ka hydroponics. Ma ọ bụ na ịkwesighi imetọ ma ọ bụ jiri fatịlaịza dị oke ọnụ dịka ọrụ ubi. Dabere n'ụdị ụfọdụ nke mejupụtara mmiri nwere n'akụkụ ụfọdụ, ọ dị mkpa itinye ụfọdụ ihe oliv dị ka iron, calcium na potassium. Sistemụ oge ụfọdụ anaghị ewepụta ihe ndị a n'ụzọ zuru oke.
Azụ na-emepụta na ahụ ike karịa ndị a zụlitere na aquaculture na olu nke mmepụta dị elu. Ọ dịghịkwa mkpa ịgwọ ahihia azụ dị ka usoro akụrụngwa ndị ọzọ. A dịghị achụpụ ha n'oké osimiri ma ọ bụ usoro mmiri dị mma ma ọ na-egbochi ịpịa mmiri nke mmiri.
Anyị nwere ike ịmepụta akwụkwọ nri na azụ nke ezigbo mma n'otu ohere.
Ọ nwere nnukwu iguzogide pests na ọrịa.
Ọrụ aquaponics oru
Ihe omumu aquaponics ulo oru kachasi elu nke uwa na China. O nwere ihe karịrị hectare 4 ma jiri teknụzụ ọhụrụ jikọtara ya na achara ochie. A na-eji ya ihe eji akọ osikapa na ọdọ mmiri ma nye ihe ndabere maka ịkọpụta ahịhịa ala niile. A na-anwa ime ihe omumu iji nweta ihe ndi ozo site na uwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere aquaponics.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ azụ » Ihe omumu
Azụ nwere ike ikwurịta okwu